Adrenaline Hydrochloride Injection - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Adrenaline Hydrochloride Injection [Incazelo] Lo mkhiqizo Ayinambala noma cishe kungekho nto enemibala emihle ketshezi. [Umsebenzi futhi Sebenzisa] Lo mkhiqizo has kokubili umphumela isebenze ka yokwamukela α futhi β yokwamukela. yokwamukela α kusebenze kungaholela ukusikwa isikhumba, mucosa futhi umkhumbi visceral; β yokwamukela ukusebenza kungaholela angiectasis ka ukuxhumelela imithambo yenhliziyo, injabulo kwemisipha lwamathambo kanye muscle inhliziyo, ukwanda kwenhliziyo nokungcebeleka kwemisipha abushelelezi bronchus kanye tra emathunjini ...
Lo mkhiqizo Ayinambala noma cishe kungekho nto enemibala emihle ketshezi.
Lo mkhiqizo has kokubili umphumela isebenze of α yokwamukela futhi β yokwamukela. yokwamukela α kusebenze kungaholela ukusikwa isikhumba, mucosa futhi umkhumbi visceral; β yokwamukela ukusebenza kungaholela angiectasis ka ukuxhumelela imithambo yenhliziyo, injabulo kwemisipha lwamathambo kanye muscle inhliziyo, ukwanda kwenhliziyo nokungcebeleka kwemisipha abushelelezi bronchus kanye ipheshana emathunjini. Umthelela blood pressure lihlotshaniswa umthamo yayo, umthamo yayo ezivamile kungabangela ingcindezi systolic ukuba bakhuphuke ngaphandle kokudala ingcindezi diastolic ukuya phezulu noma okubangela ke ukwehla kancane; Isikali yayo enkulu kungabangela kokubili ingcindezi systolic nokucindezelwa diastolic ukuya phezulu. It is ikakhulukazi esetshenziselwa usizo lokuqala ukuba okungazelelwe ukuboshwa inhliziyo futhi ukhulula uphawu ezinzima anaphylaxis isifo, ingasetshenziswa i-urticaria, ukugula serum futhi edema angioneurotic kanye somoya bronchial kanye nokunye, ibuye ngokuvamile sisetshenziswa ndawonye ukubulala izinzwa engxenyeni ethile ukuba zinde okuyisikhathi izinzwa wendawo.
Umjovo ongama: eyodwa umthamo owodwa, 2-5ml ngehhashi nezinkomo; 0.2-1.0ml izimvu futhi ezingulubeni; 0.1-0.5ml ngoba inja.
umjovo i-intravenous: eyodwa umthamo owodwa, 1-3ml ngehhashi nezinkomo; 0.2-0.6ml izimvu futhi ezingulubeni; 0.1-0.3ml ngoba inja.
Lo mkhiqizo Ingabangela injabulo, ukuphazamiseka, ukuphahlaza kube ebuhlanzweni, umfutho wegazi ophakeme (phezu umthamo), arrhythmia nokunye. umjovo okuphindiwe kungaholela necrosis wendawo.
fibrillation Ventricular kungadalwa lapho lo mkhiqizo isetshenziswa lihambisana imithi yokubulala izinzwa jikelele ezifana chloral hydrate. Akuvunyelwe ukuba babambisane ukusetshenziswa ne-digitalis ne-calcium ukulungiselela kwezokwelapha noma.
Luyakukhahlela kahle kusetshenziswe ngokuqapha ngoba organic isifo senhliziyo, i-hyperthyroidism, kuhlasimulise futhi oluhambisana ukushaqeka nokunye.
3. Lo mkhiqizo ngeke sisetshenziswe uma ushintshe ngombala.
Luyakukhahlela kahle kugwenywe ukuba wadalula ekukhanyeni futhi agcinwe isimo moya emthunzini (ngezansi 20 ℃)
Olandelayo: Ceftiofur Sodium ngoba Injection
Ceftiofur Sodium ngoba Injection
Abakhulelwe Mare Serum gonadotropin for ukufakwa ...